Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Business Type:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:11% - 20% Certs:ISO9001, RoHS, Test Report Description:whiteboard movable,kitapo,Tapakazo azo alaina,,,
Home > Products > Whiteboards Receptive Whiteboards > Toeram-pivarotana matevina afindrafindra
Ny vokatra avy amin'ny Toeram-pivarotana matevina afindrafindra , mpanofana manokana avy any Shina, whiteboard movable , kitapo mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Tapakazo azo alaina R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Reusable makorelina Magnetic Whiteboard Sheet Item No. MRWT-NS50-FXCK Azo esorina ny vatan'ny Whiteboard dia adeboive mora mipetaka amin'ny whiteboard , mora tapaka, mitanondrika, manenjana, mifangaro, na mety vita amin'ny endriny rehetra arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny fanesorana tokana tsy...
Tapaho ny rakitra Whiteboard Tapahina Item No. GRWT-NS50-FXCK removable Adhesive Whiteboard dia karazana whiteboard malefaka miaraka amin'ny adhesive , mora tapaka, manify, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Ny adhesive tsy manam-paharoa dia nanampy ny...
Shina Toeram-pivarotana matevina afindrafindra mpamatsy
Removable Adhesive Whiteboard dia dia karazana portable whiteboard amin'ny mitsingevana indray adhesive. Ny adhesive tsy manam-paharoa dia nanampy ny fanesorana ny kitapom-batana mivezivezy eny an-tsena . Tsy hoe tsy hianjady fotsiny izy, fa ho marefo ihany rehefa manasa raha maloto ny tavy.
Tapakazo azo alaina
whiteboard movable kitapo Tapakazo azo alaina